नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली र प्रतिफल सम्बन्धि समाजसेबी तथा पुर्बसचिब भिम उपाध्यायको तथ्यपरक लेख आम नेपालि युवाले पढ्न नछुटाउनु होला – Enepali Samchar
नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली र प्रतिफल सम्बन्धि समाजसेबी तथा पुर्बसचिब भिम उपाध्यायको तथ्यपरक लेख आम नेपालि युवाले पढ्न नछुटाउनु होला
March 20, 2021 March 20, 2021 adminLeaveaComment on नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली र प्रतिफल सम्बन्धि समाजसेबी तथा पुर्बसचिब भिम उपाध्यायको तथ्यपरक लेख आम नेपालि युवाले पढ्न नछुटाउनु होला
e nepalisamchaar /पुर्वसचिव एवं सामाजिक संजालमा जमेका भिम उपाध्यायले नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नु भनेको समय कटाउनु मात्रै हो भन्ने टिप्पणी गरेका छन ।
आलोचकको आलोचना र समर्थकको स्याबासिबाट खासै नबहकिने उपाध्याय देश र समाजका बिबिध बिषयहरुमाथी तथ्य, तर्क, बिबेकको आधारमा सामाजिक संजाल मार्फत सशक्तरुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन ।
हेरौं, भिम उपाध्यायले सामाजिक संजालमा सार्वजनिक गरेका धारणा –
नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नु भनेको समय कटाउनु मात्र हो। कलेज जानु भनेको बेरोजगारी हटाउन केही वर्ष अल्मलाउने मेसो मात्र हो । कलेज जानेका ९५% शिक्षा आउटडेटेड, गुणस्तरहिन, अवैज्ञानिक र निरस, देशकाल, परिस्थिति र विश्व परिवेश तथा माग अनुकूल पनि छैनन् । उर्जाशील ५/६ वर्ष अवधिको जीवन बर्वादी हो ।
यहॉका अधिकाँश विद्यार्थीहरू दलका आगो फुक्न काम लाग्ने ढुंग्रा मात्र हुन् । अहिले यस्तो शिक्षा पढेर ठूलो मान्छे बनिन्छ भन्ने पनि छैन । ८ पासे, १० भए ठूलै पद र पावरमा पुगिन्छ। नेताको पछि लागे जस्तो सुकै नियुक्ति पनि हात लाग्छ। बढी पढेका काम छैन भनेर नेताहरूलाई जिताएर जनताले सत्ता सुम्पिदै रमेकै छन्। नेताका पढाईको स्तर र सीपले देश बनेकै छ।
विद्यार्थीका पढाईले तिनलाई रोजगारी पाईन्छ भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी लिने कोही छैन । पाए विदेश हुईकिने भन्ने हो र यस्तो नेपाली शिक्षा त्यहॉ आँची पुछ्ने कागज जति पनि मान्यता छैन ।
यस्तो यहॉको शिक्षाले के नै गर्न सक्छ? अनि मुलुक अगाडि बढ्छ? ८ पास वा १० पास गरे मनग्यै पुग्छ। त्यति पढे एक्कासौँ शताब्दीको एक्काईसौँ सालमा पुगेर पनि राष्ट्रपति, प्रम, अर्थ मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री भईहालिन्छ। अनि कसैले बेकारमा वर्षौँ पढेर जीवन बर्बाद किन गरेका होलान्! केही वर्ष युवा बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न अल्मलिएकै हैनन् र?
आयो खुसीको खबर कुवेतमा गैरकानूनी रुपमा बसेका आप्रवासी श्रमिकलाई आममाफी
जब छोरीले प्रहरीमा जागीर खाएको बुवालाई मन नपरेपछि यहाँ सम्म गरे ..